Ukufikelela ngokulula kwiSDC kunye neStrip
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
Ngena kule ndawo yokuphumla yobunewunewu, ibekwe kwindawo entle enegeyithi yeStonebridge Resort. Eli khaya linegumbi lokulala eli-3 libanzi, ngoko ke akukho thuba lokuziva uxinene okanye uxinene kweli khaya lihle leholide. Thatha umzuzwana kwiveranda ekhuselweyo kwaye usele kwimagi yekofu esandula ukwenziwa, eyenziwe ekhitshini eligcweleyo. Hlaziya iisayithi zakho zemidiya yoluntu kwaye uxelele wonke umntu malunga nosuku lokuzonwabisa olucwangcisiweyo usebenzisa i-wi-fi ehambelanayo. Qinisekisa ukuthatha isilwanyana sakho sasekhaya xa uhamba kwiindlela ezintle zendalo.
Eli khaya linegumbi lokulala eli-3 libanzi, ngoko ke akukho thuba lokuziva uxinene okanye uxinene kweli khaya lihle leholide. Ngokulungiswa okuphezulu kunye nefenitshala ungabaleka kuyo yonke isiphithiphithi sobomi bakho obuxakekileyo. Thatha umzuzwana kwiveranda ekhuselweyo kwaye usele kwimagi yekofu esandula ukwenziwa, eyenziwe ekhitshini eligcweleyo. Hlaziya iisayithi zakho zemidiya yoluntu kwaye uxelele wonke umntu malunga nosuku lokuzonwabisa olucwangcisiweyo usebenzisa i-wi-fi ehambelanayo. Qinisekisa ukuthatha isilwanyana sakho sasekhaya xa uhamba kwiindlela ezintle zendalo.
Kuninzi okubonayo nokwenza kwii-Ozarks, nokuba kungaphakathi kwesango le-Stonebridge resort, zonke iindawo ezinomtsalane e-Branson okanye ukuphumla kwindalo. Ngaphakathi kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, yonwabela iiphuli ezi-3, iinkundla zentenetya ezi-3, umngxuma webhola yevoli, igalufa kwibala legalufa laseLedgestone okanye intlanzi ekulotyweni kunye nokukhulula ichibi. Thatha uhambo olufutshane ukuya e-Indian Point Marina, apho unokuqesha khona isikhephe eTablerock Lake. Kubantu abafuna imincili, thatha uhambo oluya eSilver Dollar City, ikhaya lee-roller coasters ezininzi ezimisa intliziyo kunye nokukhwela okuqinisekileyo ukwenza usuku lwakho lube lukhumbuleka. Nokuba ungubani na okanye ufuna ukwenza ntoni, unokufumana indawo efanelekileyo yokuya kwii-Ozarks.